Nanaiky Hiditra Finday Ihany Ny Nintendo Rehefa Nanosi-Bohontanana Nandritra Ny Taona Maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2015 9:18 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, 日本語, English
Filalaovana Nintendo. Sary hita tao amin'ny Pixabay, CC0 Valam-bahoaka.
Nanaiky hampisy ny lalao malazany ho hita ao anaty smartphone sy ny fitaovana finday hafa ihany ny orinasa mpanamboatra fitaovana elektronika Japoney Nintendo
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nanambara fiarahamiasa amin'ny mpikirakira lalao amin'ny finday DeNa ny Nintendo. Araka ny fifanekena, hampiasa ireo famantarana sy ireo olona amantarana ny lalao malaza Nintendo ny DeNA hamoronana lalao vaovao tanteraka.
Amin'ny maha-mpamorona lalao maherin'ny 1000 natao tamin'ny Android sy fitaovana iOS, antenaina hanome fahaiza-manao manan-danja ahafahan'ny Nintendo hamokatra amim-pahombiazana ny lalaony amin'ny finday ny DeNA.
Raha efa ela ny namolavolan'ny Nitendo lalao mivelatra Game Boy sy ireo karazam-pitaovana DS, hatreto dia mbola mitsipaka hamokatra lalao ho an'ny tsenan'ny finday faobe ity mpamorona lalao miorina ao Kyoto ity.
Manamarika ny IT Media News, izay miresaka lalao sy fanjifana fitaovana elektronika ao Japana hoe:
Hatramin'izao, tsy mety mametraka ny Mario sy ny lalao hafa ho hita ao anaty finday avo lenta (smartphone) sy ny fitaovana finday hafa ny Nintendo..
Mitazana ny mpitati-baovao Japoney malaza momba ny teknolojia Yuka Okada, manoratra ao amin'ny IT Media News:
Toa tahaka ny miditra an-tsehatra tanteraka amin'ny smartphone ny Nintendo.
Kanefa, na dia eo aza ny fahombiazana tamin'ny kitendry Wii home nivoaka tamin'ny taona 2006, niady mafy ny Nintendo hatramin'ny namokarany ny kitendry vaovao Wii U tamin'ny 2012. Sambany matiantoka ny orinasa tamin'ny 2013, na dia nahitana tamberin-tombombarotra aza tamin'ny 2014.
Nifanojo tamin'ny fanekena hampiasana haingana manerantany ny smartphone sy ny finday ho azo ilalaovana lalao maimaimpoana ny tsy fandehanan'ny tsenan'ny Nintendo.
Nanasongadina ny Nippon.com, izay mamoaka lahatsoratra fanadihadiana isan-karazany ara-potoana momba ireo lohahevitra Japoney sy mandika izany ho amin'ny teny anglisy sy teny hafa hoe:
Nitohy [niantraika tamin'ny tombom-barotry Nintendo] ny fihenan'ny varotra, nitarika fatiantoka mihagoavana hatrany hatrany.
Tamin'ny fotoana nihantsian'ireo lalao hafa amin'ny finday ny fanjakazakan'ny Nintendo, dia niteraka fahadisoam-panantenana ihany koa ny kitendry Wii U tamin'ny 2012 noho ny halafony sy ny tena zavatra mba azon'ireo mpanjifa azy amin'io vidiny io.
Ny antony tokana nahatonga ireo olona nividy ny kitendry Nintendo sy ireo rindrambainga hafa dia satria tian'izy ireo ny milalao ny lalaon'ny Nintendo. Ny [fizaka-mananan'ny Nintendo] no famonjena tokana iveloman'ny orinasa .
Tamin'ny fanekena ihany ny fifindrana tsy azo ihodivirana mankany amin'ny finday, dia misy ny fahatsapana izany no fialan'ain'ny vanim-potoana Nintendo.
Na dia mariky ny vanim-potoana sy fanapahan-kevitra ara-pandraharahana aza ny fanapahan-kevitry Nintendo hiditra amin'ny tsenan'ny finday, dia misy toe-javatra somary mampalahelo kely ihany.
Mbola nilaza ny Fllohan'ny Nintendo Satoru Iwata fa manana fatokisana amin'ny hoavin'ny kitendry filalaovana izy, ary voatsonga ny fitenenana hoe: “Tsy maninona izay mety ho lazan'ny finday avo lenta (smartphone) sy ny tablety, raha mbola maharaka ny vanim-potoana izahay, tsy hitranga mihitsy izany hoe hanjavona tanteraka ny fitaovana natokana hilalaovana.”
Raha jerena amin'ireo emoticone [sary fanehoana fihetseham-po], tsy ny rehetra no mety resy lahatra amin'ny fitokisan'i Iwata :
Filohan'ny Nintendo, Iwata. “Nalaza tamin'ny fanoheran-kevitra hatrizay ao Japana ny Nintendo. Izay nilaza fa: ‘Izao no ataon'ny hafa rehetra, ka tsy mahaliana mihitsy ny hanao izany. Te-hiasa mafy izahay ary mahita lalana hafa hahombiazana. ” (*ﾟ∀ﾟ)ｲｲ!
Farafaharatsiny, mba niteraka kisarisary mampihomehy (meme) mahaliana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Nintendo ao Kyoto sy ny DeNA ao Yokohama.
Malaza amin'ny lalao Mario ny Nintendo, raha nahazo laza tamin'ny fahazoana ny tsy fandoavan-ketra amin'ny lalao baseball matihanina Yokohama Baystars kosa ny DeNA. Niafara tamin'ny meme (kisarisary mampihomehy) manesoeso an'aterineto ao Japana ny fifandraisan'izy ireo:
Raha nanome zo ho an'ny DeNa amin'ny [Mario] ny Nintendo, dia tahaka ny efa niaraka tamin'ny DeNA nandritra ny lavalava kokoa izy (Nintendo).
Voalaza fa ahitana fitoviana manaitra amin'ny lalao Mario an'ny Nintendo i Carlos Ponce, izay nilalao tao amin'ny Yokohama Taiyo Whales (mpialoha lalana amin'ny Bay Stars tamin'ny 1980).